रोचक प्रशंगः जीवित मानिसको मृत्यु प्रमाण पत्र, जो आफैले पाए ! – ebaglung.com
रोचक प्रशंगः जीवित मानिसको मृत्यु प्रमाण पत्र, जो आफैले पाए !
२०७५ भाद्र १४, बिहीबार १६:३९	Top News, अन्य समाचार, विविध
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ भदौ १४ । प्रशंग अलि पुरानै भए पनि चर्चा भने अहिले पनि बेला बोलामा गरिदै आएकोले ताजा घटना जस्तो बनेको छ । घटना हो सन–२००९ जुलाई ६ को । त्यस दिन ईराकको टिक्री भन्ने शहरमा कार दुर्घटना भएको थियो । त्यस दुर्घटनामा गुल्मीको साविक दुविचौर गाविसका ओमबहादुर टण्डन पनि परेका थिए । दुर्घटनाको तिन महिना पछि नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दुविचौर हुलाक कार्यालयमा एउटा चिठी आयो ।
त्यति बेला त्यस कार्यालय दुविचौर कै घोर्ले माध्यमिक विद्यालय संगै भएकोले त्यस विद्यालयका शिक्षक फतबहादुर बस्नेत मार्फत टण्डनको घरमा त्यो चिठी पठाईयो । खोलेर हेर्दा–‘सन २००९ जुलाई ६ गते भएको कार दुर्घटनामा परी दुविचौरका ओमबहादुर टण्डनको मृत्यु भएको जानकारी सहित यो पत्र परिवारजनलाई पठाईएको छ’ भनेर लेखिएको थियो । संयोगः दुर्घटनामा परे पनि बाँचेर टण्डन घर आई सकेका थिए ।
टण्डन यसरी सुनाउँछन त्यो रोचक प्रशंग –‘ म सन २००६ मा भारतीय सेनाको पेन्सन निस्के पछि सेकुरेटी गार्ड भिसामा ईराकको वगदात पुगेको थिएँ । सन २००९ जुलाई ६ मा ईराकको टिक्री शहरमा कार दुर्घटनामा म सहित तिन जना प¥यौं ।
मृत्यु जितेर आए पछि उनले समाज सेवामा आफ्नो पेन्सन खर्चिने निर्णय गरेका छन । त्यहाँबाट फर्के पछि उनले दुविचौर उर्लेनी मै रहेको लिटिल स्टार बोर्डिङ्ग स्कुलमा लगानी गरे । भारतीय सेनाको पेन्सनबाट आउने मासिक ३० हजार सोही विद्यालयलाई दिने गरेको उनि बताउँछन ।
यसपालीको एसईई परिक्षमा जिल्ला मै त्यस विद्यालयले उत्कृष्ट नतिजा ल्याएकोमा उनि गौरव गर्छन । उनले प्राय कहिल्लै चस्मा आँखामा लगाउँदैनन । त्यही दुर्घटनामा परेको टाउँकोमा राख्छन । किन कि त्यो घाउँको दागहरु छोपियोस ।
तस्वीरः उनै टण्डनको
यस्तो छ दाजुव्दारा वहिनी वलात्कारको नालिबेली ….
नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको आयोजनामा बागलुङमा अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस !